Maalinta: Febraayo 12, 2018
Waxqabadka Koritaanka Horumarka ee IZBAN
IZBAN'da waxay bilaabmi doontaa Febraayo 15, iyada oo kuxiran jawaabta sicirka tartiib tartiib ah ee sicirka qarsoodiga ah ee kor u kacaya maalin walba. Ururka Gobollada TKP İzmir wuxuu miis ka furay saldhigyada İZBAN wuxuuna ururiyaa saxiixyo ka dhan ah kor u qaadista. TMMOB Izmir [More ...]
Munaasabadda TV-yada ee 'Little Çamlıca' oo furmay sanadkan
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa sheegay in hadafkiisu ahaa in la soo gabagabeeyo K TVk Çamlıca TV-Radio Tower kaas oo loo dhisay si loo sameeyo baahin tayo leh iyo in laga badbaadiyo Istanbul wasakheynta muuqaalka. Wasiirka [More ...]
KPSS 2017/2 doorbiday toddobaadkii la soo dhaafay ka dib markii lagu dhawaaqay natiijada Jamhuuriyadda Turkey Tareennada State (TCDD) ayaa daabacay dhawaaqay sida ku habboon. Si kastaba ha noqotee, waxaa la sheegayaa in liiska mar labaad la cusbooneysiinayo oo magacyo cusub lagu soo daray liiska. [More ...]
Duuliyihii Maali Caasimadeed ee Atabey Piyer piery ayaa qabanaya shaqooyin muuqaal ah. Hawlaha buuxinta iyo qodista ayaa la dhammeystiray illaa xad aad u weyn. Dekeda Atabey dekeda waxay sameyneysaa xoogaa qorsheyaal Dowlada Hoose ee Magaalo Xeebeedka, waxay sixirtaa howlihii dekeda [More ...]
Sida lagu sheegay warbixinta Mehmet Kizmaz oo ka socota Jamhuuriyadda; Dhismaha garoonka diyaaradaha seddexaad, shaqaalaha 400 waa la diley qoysaska qoysaska ka soo jeeda Anatolia waa la aamusiiyey iyagoo siinaya lacag. Eedeymahaas waxaa loo wareejiyay baarlamaanka. Ururada Ganacsiga CHP, Shaqada [More ...]
3. Shaqaalaha garoonka diyaaradaha, cadaadis deg deg ah ayaa lagu saaraa, waxay yiraahdaan wax talaabo ah oo amniga loo qaaday ma jiraan. Sida laga soo xigtay shaqaalaha dhahaya, "Zincirlikuyu, dadka dhintay waxaa loosoosaa coffins, halkan boorsooyin jirka ah, ölüm dhimashadu waa la qariyey iyagoo lacag siiya qoysaska. Burburka dabeecadda [More ...]
Gaadiidka Eskişehir waa socotaa
Muwaadiniinta ay ahayd inay 1 kiiloomitir lugeeyaan si ay u gaaraan basaska u kala wareegaya İZBAN sababta oo ah dhismaha buundada ee Foça ayaa kacsan. Foçalılar, waxay olole ka bilowday khadka Internetka ee xalinta Muwaadiniinta degmada Foca ee Izmir, dhismaha buundada [More ...]
Agaasimaha Waxbarashada Qaranka oo la xiray Qashqashaad Dhibaatada TÜVASAŞ
Magaalada Sakarya, dugsiga sare KY wuxuu ku kadeeday shaqaale shaqaale ah oo isagu isbaray dhakhtar ahaan warshaddiisa gaari. Shaqada ka fariistay howlwadeenka maamulka ayaa isku dayey inuu xiro dhacdada. Agaasimaha gobolka ee waxbarashada guud Pervin Töre, fadeexad [More ...]
Magaalada Ankara, oo ah magaalo madaxda, waxay noqotay mid ka mid ah magaalooyinka magacooda u sameysay magac. Iyada oo xawaareheeda iyo raaxadeeda, nidaamyada tareenka, ee noqday mid lama huraan u ah muwaadiniinta [More ...]
nidaamka Kayseri hafifrayl waxaa bixiyey kaydadka gaari door ah oo ku saabsan 127 million pounds baabuurta soo saaray dalka Turkiga. Kayseri oo raba inuu kusii wato gaadiidkiisa gudaha halkii uu ka isticmaali lahaa gaadiid fudud oo laga soo dhoofiyo Talyaaniga [More ...]
Khadka tareenka ee Kabatas-Besiktas-Mecidiyekoy-Mahmutbey ayaa la rajaynayaa inuu xalliyo dhibaatooyinka taraafikada ee Istanbul. XILKA 'XILKA' 2018'E TRALES SI WAA LAGA QAADAN KARA boqolkiiba boqol ee mashruuca ayaa la soo gabagabeeyey dhamaadka sanadka cusub ee tijaabooyinka imtixaanka 80 ayaa bilaaban doona. Kabatas - Besiktas - [More ...]
RayHaber 12.02.2018 Warbixinta Shirka
Qolka nooca darawalada gawaarida gawaarida ee nooca loo yaqaan "DE 24000" waa la iibsan doonaa (TÜLOMSAŞ)
Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Mersin, waaxda magaalo-weynta magaalada gudaheeda darawalada gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya xisaabinta iyo kulanka macluumaadka la qabtay. Dawlada Hoose ee Mersin [More ...]
Raadin Gaadhi Lama Helin Gaadiidka Xawaaraha Sare ee Bursa-Yenisehir
Markii mashruuca tareenka xawaaraha sare ah uu horay u soo galay, waxaa suurtagal ahayd in la dhiso saldhigga gobolka Gürsu. Si kastaba ha noqotee, marka ururada aan dawliga ahayn, gaar ahaan beeralayda, ay diideen in dhulalka caadiga ah ay waxyeello u geystaan, Kazıklı ayaa yimid. [More ...]